haKenya oo sheegtay iney ka feejigan tahay weeraro ay Al-sbaab ka geystaan gudaha dalkaasi
Home /Blog/haKenya oo sheegtay iney ka feejigan tahay weeraro ay Al-sbaab ka geystaan gudaha dalkaasi
Dowladda Kenya ayaa sheegtay iney ka feejigan tahay weeraro ay suurtagal tahay in Al-shabaab ay ka geystaan gudaha dalkaasi Xilli uu Maanta Magaalada Nairobi tagayo Xoghayaha guud ee QM Antonio Guterres.
Ciidamada Ammaanka dalka Kenya ayaa hawlgallo ka wada Magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi iyo xadka ay wadaagaan wadamada Soomaaliya iyo Kenya.
Saraakiisha Amniga dalka Kenya ayaa warbaahinta u sheegay iney heleen xog ku saabsan in Al-shabaab ay qorsheynayaan weeraro ay ka geystaan gudaha dalkaasi oo ciidamo qayb ka ah hawlgalka AMISOM ay ka joogaan Soomaaliya.
Al-shabaab ayaa dalka Kenya ka fuliyey weeraro qorsheysan oo dhiig badani ku daatay kuwaasoo ay ka mid yihiin weerarkii Jaamacada Garissa iyo weerarkii Xarunta Ganacsiga Magaalada Nairobi ee West Gate Mall oo ay dad badan naftooda ku waayeen.
Waasidee Saaka Xaalada Amni ee Magaalada Bosaaso Xarunta Gobolka Bari?
Guddiga abaaraha oo sheegay inay soo gaarin dhaqaale Puntland loogu yaboohay